Marihan’i Okraina ny tsingerintaonan’ny hetsika Euromaidan tamin’ny andron’ny fahamendrehana sy ny fahafahana · Global Voices teny Malagasy
Iaino indray ny fitantaran'ny Global Voices ny Revolisionan'ny Fahamendrehana
Voadika ny 22 Novambra 2021 4:04 GMT
Vakio amin'ny teny українська, Ελληνικά, English
Mpanao fihetsiketsehana #Euromaidan nameno ny afovoan-tanànan'i Kyiv tamin'ny 1 desambra 2013. Saripikan'i Alexandra Gnatoush. Nahazoana alalana.
Tamin'ny 21 novambra no nanamarihan'i Okraina ny tsingerintaona fahavalon'ny hetsipanoherana Euromaidan—fitrakàna mahaolompirenena niainga avy eny ifotony nanomboka tamin'io andro io tamin'ny taona 2013 ary nitarika fanovana nampihovitrovitra ny mponin'ny firenena. Ankehitriny ny hetsika nitranga tamin'ny Novambra 2013-Febroary 2014 lasa fantatra ho Revolisionan'ny fahamendrehana, mitaratra ny fivoaran'ny hetsika niainga avy amin'ny fivoriana kely nataon'ny pro-Eoropeana ka lasa fivoriana goavana nanehoana ny tsi-fahafahampo, nanavatsava sisintany sy hasin'ora, ary nahasahana ireo tolona nanoherana ny governemanta mpanao kolikoly sy ny herisetran'ny polisy, sy ny hetaheta fanovana politika sy sosialy.
🇺🇦✌️ Finaritra fetin'ny fahafahana sy ny fahamendrehana. Tamin'ity andro ity no nanombohan'ny ny revolisiona laoranjy 2004 sy ny revolisionan'ny fahamendrehana 2013. Mendrika ririnina velon'afo ny fahafahana sy ny fahamendrehana.
Notantarain'ny Global Voices mavitrika ny Revolisionan'ny Fahamendrehana tamin'ny taona 2013 sy 2014, nahitana ny feon'ireo olompirenena tsy hita isa araka izay azon'ny mpanoratra ato aminay. Manasa anareo izahay hiaina indray ny fotoan-dehibe tamin'izany fotoanan'ny Euromaidan izany amin'ny alalan'ny fanavatsavàna indray ny zoro fitantarana manokana.
Vakio bebe kokoa ny tatitry ny Global Voices momba ny hetsika Euromaidan tao Okraina.
Hatramin'ny taona 2014 ireo mpandray anjara an-tsitrapo ato aminay no nitaratra ihany koa ny taorian'ny Euromaidan sy ny nanovan'ny Revolisionan'ny Fahamendrehana an'i Okraina sy ny Okrainiana. Vakio etsy ambany ny sasantsasany amin'ireo tantara ireo:
Euromaidan Enim-bolana Aty aoriana, Mampatsiahy Ny Zavatra Azo [mg]
Herintaona aty aoriana: Mahatsiaro ny Euromaidan anjotra ny Okrainiana [fr]
Kaonty Twitter Okrainiana mitantara ny hetsipanoherana Euromaidan isan'andro [en]
Fahatsiarovana ireo ‘Zato any an-danitra’ avy ao Okraina [fr]
Ahoana ny nanovan'ny #EuroMaidan sy ny ady nifanaovana tamin'i Rosia ny Aterineton'i Okraina [fr]
Fisoloam-bava ny vehivavy sy ny ankihy tao Okraina Post-Euromaidan [en]
Eoropa Afovoany & Atsinanana08 Novambra 2021